OLCreate: Am I ready to study in English - Myanmar အဆင့် ၈ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုဇယား
/ ► အဆင့် ၈ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုဇယား
မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်များ (Tasks) သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းများ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု ဇယားကွက် A သို့မဟုတ် B သို့မဟုတ် C ကိုရွေးပါ။
အခြားမှတ်ချက်ပြုလိုသည်များ ရှိပါသလား ဥပမာ လုပ်ဆောင်ရသည့်အလုပ်က မျှော်မှန်းထားသည်ထက် အချိန်များစွာပိုကြာသည်။
အခုအဆင့် ၉ နောက် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ? [Tip: hold Ctrl and clickalink to open it inanew tab. (Hide tip)] ကို ဆက်ကြည့်ပါ။